खेलकुद - Sano Aawaj
रोनाल्डो विश्वकप खेल्न कतार नआउने निणर्य
Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, खेलकुद, ट्रेन्डिङ
एजेन्सी – सुरुवाती एक गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा पोर्चुगल अर्को वर्ष कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप कतार २०२२ को लागि सोझै छनोट हुन असफल भएको छ । घरेलु मैदानमा एक गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा सर्वियासँग २-१ ले स्तब्ध हुदै पोर्चुगल विश्वकपमा सोझै छनोट हुन असफल भएको हो । यो जितले सर्वियाले पोर्चुगललाई पछि पार्दै समूह ‘ए’ बाट विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको छ । पोर्चुगललाई विश्वकपमा सोझै छनोट हुन बराबरीको नतिजा पर्याप्त हुने भएपनि हार बेहोर्न पुग्दा विश्वकपमा छनोट हुन असमर्थ बन्यो । अब पोर्चुगलले प्ले अफको बाटोबाट विश्वकप छनोटका लागि खेल्नेछ । प्ले अफका खेलहरु मार्चमा हुनेछ । सर्वियाको जितमा डुसान टाडिक र एलेक्सानडर मित्रोभिकले गोल गरे । रेनाटो सान्चेजको गोल सान्त्वना बन्यो । लिस्वोआमा आइतबार राति भएको खेलमा पोर्चुगलले खेलको दोस्रो मिनेटमा...
अष्ट्रेलियाले जित्यो टी-ट्वान्टी विश्वकपको उपाधि
Breaking news 1, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, खेलकुद, ताजा अपडेट
अष्ट्रेलियाले आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । दुबईमा आइतबार राति भएको फाइनलमा न्युजिल्याण्डलाई ८ विकेटले हराउँदै अष्ट्रेलियाले उपाधि जितेको हो । अष्ट्रेलियाले पहिलो पटक टी-ट्वान्टी विश्वकपको उपाधि जितेको हो । दुबई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा न्युजिल्याण्डले दिएको १ सय ७३ रनको लक्ष्य अष्ट्रेलियाले १८ ओभर ५ बलमा मात्र २ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । अष्ट्रेलियाले सेमिफाइनलमा बलियो टिम पाकिस्तानलाई ५ विकेटले हराएको थियो। यस्तै, न्युजिल्याण्डले सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई ५ विकेटले हराएको थियो ।...
मेसीले भने, ‘सम्भव भए बार्सिलोनाकै लागि योगदान दिन चाहन्छु’
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, खेलकुद
एजेन्सी । फुटबल क्लब बार्सिलोनामा २१ वर्ष बिताएर लियोनल मेसी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी) गए। उनको बार्सिलोनाबाटको बहिर्गमन अनपेक्षित भयो। तर मेसीको बार्सिलोना मोह उस्तै छ। हालै मेसीले आफूले सम्भव भए बार्सिलोनालाई नै योगदान दिन चाहेको बताएका छन्। फुटबल सन्यास लिएपछि प्राविधिक सेक्रेटरीको पदमा बार्सिलोनामै फर्किएर क्लबलाई सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन्।स्पोर्टसँगको अन्तरवार्तामा मेसीलाई ‘कुनै दिन बार्सिलोना फर्कने योजना छ कि छैन ? भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा मेसीले भने, ‘छ, मैले जहिले पनि भनेको छु कि म क्लबलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछु। म कुनै दिन प्राविधिक सेक्रेटरी बन्न चाहन्छु। यदि सम्भव छ भने म पुनः क्लबलाई योगदान दिन चाहन्छु। किनभने त्यो मैले माया गरेको क्लब हो र त्यो माया सधैँ बढी नै रहन्छ।’ मेसीले गत अगस्तमा पीएसजीसँग एक वर्षको करार गरेका थिए। यसमा करारलाई थप एक...
मध्य भोटेकोशीकाे आईपीओ केहीबेरमा बाँडफाँड हुँदै, छिटाे नतिजा कहाँबाट हेर्ने ?
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, खेलकुद, ताजा अपडेट, सेयर बजार
मध्य भोटेकोशीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको प्राथमिक शेयर आईपीओ आज शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आज शक्रबार विहान ९ बजे क्यापीटलको कार्यलयमा आईपीओ बाडँफाँड गरिदैछ । कम्पनिले असोज २० गतेदेखि २५ गतेसम्म प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँ अंकित दरमा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । जसमा ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामुहीक लगानी कोषको लागि, ४ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ८१ लाख ९० हजार कित्ता सर्वसाधारणहरूका लागि छुट्याइएको थियो । कम्पनीको आईपीओमा अन्तिम दिन २५ गते वेलुकासम्ममा २३ लाख ९३ हजार ४२८ जना आवेदकले आवेदन दिएका थिए । मागभन्दा बढि आवेदन परेको धितोपत्रको नियम अनुसार ...
पाकिस्तानविरुद्ध कहाँ चुक्यो भारत ? यस्ता छन् लज्जास्पद हारका कारणहरु
एजेन्सी – टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा भारत पहिलोपटक पाकिस्तानसँग पराजित भयो। आइतबार राति भएको भारत १ण् विकेटले पराजित भएको हो। पहिले ब्याटिङ गर्दै भारतले दिएको १ सय ५२ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले बिना कुनै क्षति १३ बल अगावै भेट्टायो। पाकिस्तानविरुद्धको लज्जास्पद हार बेहोरेको भारत कहाँ चुक्यो ? टस हार्नु भारतीय टिमले टस हार्नुलाई खेल हार्नुको प्रमुख कारण मानेको छ। पछिल्ला ८ खेलको रिकर्ड हेर्ने हो भने २०१८ पछि टी–२० मा भारत ती सबै खेलमा पराजित भएको छ जसमा पहिले ब्याटिङ गर्दै १ सय ६० भन्दा कम रन बनाएको छ। ओपनर फ्लप भारतले हारको अर्को कारकका रुपमा कमजोर ओपनिङलाई लिएको छ। टिमले ओपनिङमा सबैभन्दा बढी भरोसा गरेको थियो। तर ठूलो खेलमा रोहित शर्मा र केएल राहल पूर्णरुपमा फ्लप भए। शर्मा पहिलो बलमै आउट भए भने राहुल ३ रनमा पवेलियन फर्किए। यसबाट भारतको ब्य...
Breaking news 1, अन्तर्राष्ट्रिय, खेलकुद, ताजा अपडेट, व्यक्तित्व
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्लुल्लाह अल्मुताइरीले पद त्यागको घोषणा गरेका छन् । आज नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । यससँगै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको छ । नेपालले साफ च्याम्पियनपसिपको फाइनलमा स्थान बनाएको यो पहिलोपटक हो । तर, प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने आफूले टिमलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको भन्दै साफको फाइनलपछि आफू नेपाल नफर्किने बताए । ‘‘अन्तिम तीन दिनमा मैले धेरै नराम्रो अनुभव गरेँ । ममाथि धेरै अरोप लाग्यो । हिजो हाम्रो ३ बजे ट्रेनिङ थियो । त्यसकारण सहायक प्रशिक्षक र अर्को एकजना खेलाडी प्री म्याच प्रेस कन्फ्रेन्समा आएका हुन् । एउटा मिडियाले त्यसैलाई समाचार बनायो र मजाक उडायो,’’ नेपालका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने, ‘‘आफ्नो प्रशिक्षकलाई त सम्मान गर्नुपर्छ । हामी प्रशिक्षक हौँ । नोकर होइन । हामी परिवार हौँ । हामी मानव हौँ । हाम्रो...
२७ आश्विन २०७८, बुधबार२७ आश्विन २०७८, बुधबार२७ आश्विन २०७८, बुधबार by sanoaawajNo Comments
Breaking news 1, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, खेलकुद, ट्रेन्डिङ
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिकको मद्दतले पोर्चुगलले लक्जम्बर्गमाथि शानदार जीत हासिल गरेको छ । विश्वकप छनोट अन्तरगत मंगलबार राति भएको खेलमा पोर्चुगल ५–० गोलले विजयी भएको हो ।खेलका आठौँ र १३ औँ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै रोनाल्डोले टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । १७ औँ मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजले अर्को गोल थपे । दोस्रो हाफमा जोआओ पाल्हिन्हाले चौथो गोल गरे भने खेलको अन्त्यतिर रोनाल्डोले अर्को गोल थप्दै आफ्नो ह्याट्रिक पुरा गरे । योसँगै रोनाल्डो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या ११५ पुर्याएका छन् । ३६ वर्षीय खेलाडीले गत महिनामात्र अली देइको सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमान भंग गरेका थिए । समूहकै अन्य खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको सर्बियाले अजरबैजानलाई ३–१ ले हरायो । ...
१८ आश्विन २०७८, सोमबार१८ आश्विन २०७८, सोमबार१८ आश्विन २०७८, सोमबार by Aayam KhadkaNo Comments
साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलंकासंगको खेल अघि यसो भन्छन कोच अब्दुल्लाह अल्मुताईरी
साफ च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा आज सोमबार नेपालले श्रीलंकाको सामना गर्दैछ । माल्दिभ्सको मालेको हुने आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले फिफा बरीयतामा आफूभन्दा निकै तल रहेको श्रीलंकासँग खेल्न लागेको हो । खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १० बजे सुरु हुनेछ । नेपाल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा छ भने श्रीलंका पहिलो जितको खोजीमा छ । यसअघिको खेलमा नेपालले साविक विजेता तथा आयोजक माल्दिभ्सलाई १–० गोल अन्तरले पाखा लगाएको थियो ।श्रीलंकासमेत सोही नतिजाका साथ बंगलोदशलाई ३ अंक सुम्पिएको थियो । खेल अघि प्रि(म्याच पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीको प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताईरीले श्रीलंका बलियो टोली रहेको र सचेत भएर ३ अंकका लागि खेल्ने बताएका छन् । कप्तान किरणकुमार लिम्बुले ९० मिनेट मिहिनेत गर्दै ३ अंकका लागि खेल्ने बताए । बिगत हेर्दा नेपालभन्दा श्रीलंका बलियो देखिन्छ । नेपाल र ...